बन्द रंगशालामा क्रिकेट खेलाउने पक्षमा ल्याङ्गर- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २४, २०७६ एएफपी
सिड्नी — अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक जस्टिन ल्याङ्गरले बन्द रंगशालाबाट फेरि क्रिकेट सुरु गर्ने पक्षमा आफू रहेको आइतबार बताएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले क्रिकेट रोकिएको अवस्थामा छ । फेरि यसलाई ब्युँझाउन दर्शकविहीन स्थितिबाट खेल सुरु गर्नुको पनि ठूलो अर्थ हुने उनले दाबी गरे ।
अन्य सबै खेलजस्तै पूरा विश्व क्रिकेट अहिले शून्यको स्थितिमा छ । फेरि कहिलेदेखि खेल
सम्भव हुने हो, त्यो निश्चित छैन । यस्तोमा क्रिकेटका खेल फेरि सुरु गर्न बन्द रंगशालामा क्रिकेट गराउने पनि एउटा उपाय मानिएको छ । ल्याङगरले भनेका छन्, ‘जतिबेला उमेर समूहमा क्रिकेट खेलिन्थ्यो, त्यतिबेला पनि दर्शक त हुन्न नै थिए ।’
उनले थपेका छन्, ‘तर हामी त्यस्तो स्थितिमा पनि क्रिकेट खेल्थ्यौं, किनभने हामीलाई यो खेल मनपर्छ । क्रिकेट खेल्नुमा प्रेम छ । यही खेलको मायाका कारण हामीले खेल्नुपर्छ र कम्तीमा टेलिभिजन तथा रेडियोबाट त आम खेलप्रेमीले यसको मज्जा लिन सक्छन् । यो फरक स्थिति हुनेछ, तर अहिले हाम्रा लागि फेरि क्रिकेट खेल्नु पनि ठूलो हो ।’
यसअघि इंग्ल्यान्डको एकदिवसीय विश्वकप विजेता कप्तान इयान मोर्गनले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अनिश्चित भएको क्रिकेट सिजनलाई ठोस रूप दिन एकै दिन फरक फरक स्थानमा दुई अगल टिम उतार्दा पनि फरक नहुने बताएका थिए । उनी पनि चाँडै विश्व क्रिकेटलाई मैदानमा फर्काउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ ११:४०
बागलुङमा छैन द्रुत परीक्षण किट
चैत्र २४, २०७६ प्रकाश बराल
बागलुङ — सरकारले र्‍यापिड टेस्ट (द्रुत परीक्षण) गर्ने भने पनि किट्सलगायतका उपकरण जिल्लामा छैन । संघीय सरकारले सोमबारसम्म किट उपलब्ध गराउने भनेका आधारमा यहाँ संकलित तथ्यांक, जनशक्ति र अस्पतालको क्षमताबारे छलफल सुरु भएको छ ।
धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा प्रारम्भिक तयारीस्वरूप सबै जनरल वार्डलाई सकेसम्म आइसोलेसन बनाउने, औषधि व्यवस्था गर्ने तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित रूपमा परिचालित गर्ने काम थालिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले शनिबार कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा र्‍यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री नभएकाले हाल यहाँको अस्पतालमा सामान्य सेवा र स्वाब संकलनपछि पठाउने काम मात्र भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुरज गुरौका अनुसार जिल्लामा करिब ९ सय विदेशबाट आएको तथ्यांक छ । तिनैमध्ये दुई जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण भेटिएपछि जिल्लामा त्रास फैलिएको छ । विदेशबाट आएका अधिकतरको परीक्षण गर्न बाँकी छ । उनीहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा बनेका क्वारेन्टाइनमा नभई घरमै बसेका छन् । ‘शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइनमै राख्‍नुपर्नेछ,’ गुरौले भने, ‘पालिकाहरूमा क्वारेन्टाइन बने पनि कोही बसेका छैनन् ।’
प्रमख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैंजूले पहिलो चरणमा विदेशबाट आएका, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरिने तयारी रहेको बताए ।
संक्रमित भेटिए अस्पतालका सबै वार्डलाई आइसोलेसन बनाएर राख्ने तयारी छ । सरकारले धौलागिरी अस्पताललाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाउने भनेको छ । अहिले अस्पतालमा २ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
डा. झलक गौतमले सोमबारसम्ममा परीक्षणको कार्यविधिसमेत बनाइने बताए । ‘कसरी, कति जनासम्मको परीक्षण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कार्यविधि बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि परीक्षण र उपचार हुन्छ ।’
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पोखरेलले स्वास्थ्यकर्मीलाई परीक्षणबारे तालिम आवश्यक भएको बताए । ‘सामान्य किटमा परीक्षण गरेजस्तो होइन, जतिबेला पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सर्न सक्ने भएकाले तालिम र सुरक्षित सामग्री चाहिन्छ,’ उनले भने ।
कोभिड–१९ बाट संक्रमति युवासँगै कञ्चनपुरबाट आएको पत्ता लागेपछि एक जनालाई बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ ।
लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रशासनले आइतबारदेखि कडाइ गरेको छ । आइतबार बिहान मात्रै प्रहरीले घर बाहिर बिनाकाम डुलेका ४० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ ११:०५